အာရပျကမ်ဘာ အပွောငျးအလဲမြိုးနဲ့ မွနျမာ့နိုငျငံရေး အဖွရှောမရနိုငျ — မွနျမာဌာန
အမေစု သဘောထားကို ကျွန်တော် အပြည့်အ၀ ထောက်ခံပါတယ်။ ကချင်လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် ကချင်ပြည်နယ်အရေးလည်း အပြုသဘောဆောင် အမြန်ဆုံးအဖြေရှာနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။ အားလုံးတိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့၊ ငြိမ်းချမ်းသာယာပြီး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား၊ မိသားစုတွေ အဆင်ပြေကြပါစေလို့ ရင်မှအမှန် ဆန္ဒပြုပါတယ်။
အစိုးရနှင့် ပြည်သူများ ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။
She has some doubt about President Thein Sein’s capability and authority to change Government direction but she comment with caution, wise and very intelligent way.
I absolutely trust her. Daw Su is trying to veer current Government policy to right direction at the moment and we must support her. I hope President U Thein Sein will listen to Daw Su and he will become sincerely on Burma future.
Thein Sein needs some times for inner circle change in the military and Government.
We should not forget about she will be standing by Burmese peoples side.
We have to decide and think with our head for what should we do if Government does not change in coming years.